Salmon au gratin ngamakhiwane kunye neetapile | Ukupheka kweKhitshi
UHana mitchell | | Iiresiphi ezineziqhamo, Ukupheka kweentlanzi, Iiresiphi ezisempilweni, Iiresiphi ezilula
UKUQAPHA I-LAZY! Namhlanje ndikuzisela iresiphi emnandi ebonakaliswa kukunyibilika emlonyeni kwaye, ukubhakwa, oko akuthethi ukuba kukho naziphi na iinzame kwicala lethu (xa ufunda inyathelo ngenyathelo uyakuqonda). Ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ungangcamla oku kuhle isalmon gratin enamakhiwane kunye neetapile. Ewe bahlobo, intlanzi kunye neziqhamo, indibaniselwano kakhulu sexy (ewe, ishushu ligama).
Layita iovini unxibe ifaskoti yakho kuba uhambo lwakho oluya "kwisitya sobomi bakho" luqala (ubuncinci kude kube ngokuhlwa).
Ngaba ndivile ukulamba nobuvila? Ewe ndinayo iresiphi efanelekileyo yolu hlobo lwetyala! Ngaphantsi kwemizuzu engama-30 kwaye ngaphandle komzamo omncinci unokungcamla oku kuhle isalmon gratin enamakhiwane kunye neetapile.
Iifilim ze-4-5 zeesalmon
Iitapile ezinkulu ezi-3
I-75 gr yetshizi emental
Siyaxobula iitapile kwaye sizinqumle isitayile sokubhaka.
Sigalela isitya sokubhaka ngeoyile yomnquma kwaye sibeke iitapile ezibhakiweyo ngendlela yokuba zigubungele sonke isiseko sesitya.
Gweba isitayile se-anyanisi se-julienne kwaye usasaze kwiifatata.
Yongeza ijethi yeoyile yomnquma, ityuwa kwaye uyibeke ehovini (ishushu ngaphambili kubushushu obungu-190º imizuzu eli-15). Sibhaka imizuzu eli-15.
Ngelixa silinde iitapile ukuba zipheke, siphawula iifilikhi zesalmon epanini kude kube nsundu ngegolide kumacala omabini. Sabhukisha.
Nje ukuba kudlule imizuzu eli-15, sikhupha isitya setapile, sathambisa i-emental itshizi ngaphezulu ukuze singcamle kwaye sibeke iifilthi zesalmon ngaphezulu.
Sisike amakhiwane kwisiqingatha size sibeke esinqeni salmon.
Sibeka itreyi sibuyele kwihovini kangangemizuzu eli-15 ngaphezulu, sicime kwaye siyeke ukusebenzisa ubushushu bomntu ngamnye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Iiresiphi ezineziqhamo » Salmon gratin ngamakhiwane kunye neetapile
Ipesika eyosiweyo enomkhenkce